VANA VACHANGOBEREKWA, IZVO ZVAUNODA ... UYE ZVAUNODA KUTI UITE ... WHELPING UYE KURERA VANA - IMBWA
Vana vachangoberekwa, izvo zvaunoda ... uye zvaunoda kuti uite ... Whelping uye Kurera Vana
Izvo zvaunoda ... uye zvaunoda kuti uite ... Whelping uye Kurera Vana vadiki
Foni, uye LOTS yekofi :)
st bernard rakakura dane mastiff musanganiswa
Zvinhu zvitatu zvinopisa ...
Mbwanana dzinochengetwa mumabhini kana zvisiri nedhamhu. Kana iwe usina dhamu rakanaka iro rinovimbika zana neeputi, uchifunga kwete chete hunhu hwake, asi saizi yake uye kuomesesa kwekusununguka, ipapo vana vacho vanofanirwa kuchengetedzwa uye kupatsanurwa, uye kupihwa kuna amai vaviri vaviri. maawa achitarisirwa. Pups haigone kusiiwa iri yoga nemamwe madhamhu.
Maviri ekupisa mapedhi pasi pembudzi mbichana, akaiswa kune imwe END yemabhini, kudziya chete.
Iwo mapads ekupisa anofanirwa kungove akatenderedza hafu yebhini, saka vana vanogona kusimuka kubva panobva kupisa kana ivo vakanyanya kudziya. Iwe haudi kuti ive inodziya, kana iwe unogona kudzimbirira, kushayisa mvura mumuviri, kana kubika imbwa. Iyo yekudziya pad inogona KUSA KUMWE KUNYANYA KUNA KUTI URI MUKATI BIN
Zana muzana muzana rinotariswa apo dhamu rine vana. Gara navo, rara navo, nezvimwe.
Mbwanana dzinofanirwa kuyerwa zuva nezuva kuratidza kufambira mberi kwavo. Kune iyo pups iyo yese inotaridzika zvakafanana, iwe unofanirwa kuteedzera iyo ndeipi nekukara-kukodha makorari avo. Ini ndinogona kutaura mutsauko muvadiki, asi vabatsiri vangu havagone, uye RUBATSIRO rwakakosha zvakanyanya.
labrador uye musande bernard musanganiswa
Emily mubatsiri mukuru, achivaremera vese ini uye achiisa vanowana zvishoma pane kutanga, anobva atora huremu hwebhuku rake, obvisa huremu hwekuzvarwa. Ichi chiitiko CHINODZIDZA chekudzidzisa chevana, uye chinoita kuti vabatanidzwe, PLUS inoshandisa pfungwa dzavo pahunyanzvi hwemasvomhu.
labrador retriever uye rottweiler musanganiswa
Emily kutemera huremu hwehuremu hwembwanana yega yega ine peji yayo.
Basa raKayden nderekuchengeta Sassy mukubata uye kubatsira Emily. Sassy anofunga kuti basa raKayden rakakosha, rakakosha kupfuura chero izvo Emily arikuita (grin).
Kayden zvakare inopawo Sassy icho icho chakakosha-rudo uye Kutarisisa! EHE! Sassy anonyatsoda basa raKayden.
Oo kwete, handifunge kuti Sassy Mastiff wechiChirungu ari kushomeka mudhipatimendi rerudo!
Uye kana zvese zvaitwa, munhu wese anotsvoda nekumbundirana.
yorkie nhumbu vhiki nevhiki
Izvo zvakatora anopfuura awa .... TINODZOKA kuti tidzokore chaizvo, nekukurumidza.
Kutendeseka kweMistyTrails Mastiffs
Kunyangwe ichi chikamu chakavakirwa pane whelping ye Chirungu Mastiff , iinewo ruzivo rwakanaka rwekutsvagisa imbwa hombe-dzinobereka. Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo rwekutsvagisa mune zvinongedzo zviri pamusoro. Izvo zvinongedzo pazasi zvinotaurira nyaya yaSassy, ​​Chirungu Mastiff. Sassy ane hunhu hwakanaka. Anoda vanhu uye anoda vana. Kwese-kwakatenderedza hunyoro hunhu, anoshamisa Mastiff, Sassy, ​​zvisinei, haasi amai vakanakisa kune mbwanana dzake. Iye haasi kuvaramba iye achavayamwisa kana munhu akaaisa paari kuti adye, zvisinei haazochenese vana vacho kana kupa hanya kwavari. Zvinoita sekunge hadzisi imbwanana dzake. Tsvina iyi iri kuwana mukaka wamai nekudyidzana kukuru kwevanhu, nemaoko kupa mumwe neumwe mwana zvavari kuda. Mukudzoka, vana vacho vanozoshamwaridzana uye vanozoita mhuka dzinovaraidza dzinoshamisa, zvisinei basa rakabatanidzwa rinoshamisa. Zvinotora muberekesi mumwe akazvipira kuti achengete mamiriro aya aine hutano. Ndinotenda kuti marara aya ane izvo chete. Verenga zvinongedzo pazasi kuti uwane yakazara nyaya. Iwo mapeji mukati anosanganisira hupfumi hwemashoko ayo munhu wese anogona kukoshesa uye kubatsirwa nawo.
C-Chikamu mune Yakakura Kubereka Imbwa
Vana Vachangoberekwa ... Zvaunoda
Whelping uye Kurera Huru Kuberekera Mbwanana: 1 kusvika ku3 Mazuva Akare
Zvinhu hazviwanzo kuenda sekuronga (imperforate anus)
Nherera Litter yePups (kwete iyo zano)
Kurera Mbwanana Mazuva gumi Yekare Kuwedzera +
Kurera Vana Vacheche 3 Vhiki Dzana Dzana
Kurera Puppies 3 Mavhiki - nguva yekutanga poto kudzidziswa
Kurera Vana vadiki mavhiki mana ekuberekwa
Kurera Vana vadiki mavhiki mashanu ekuberekwa
Kurera Vana Vacheche mavhiki matanhatu ekuberekwa
Kurera Vana vadiki mavhiki manomwe ekuberekwa
Whelping uye Kurera Huru Dzakaberekwa Imbwa Main
Whelping uye Kurera Vana, hutsva hwakawanikwa
Unoda Kubereka Imbwa Yako
Pros uye Cons yeInbreeding Imbwa
Whelping uye Kurera Mbwanana: Zera rekubereka
Kubereka: (Iyo Inotenderera Yekutenderera): Zviratidzo zveKupisa
Imbwa Pamuviri Karenda
Kubata Pamuviri Kubata Pabonde
Imbwa Dzine Mimba
Pamuviri Imbwa X-Ray Mifananidzo
Yakazara-Nguva Mucus Plug muImbwa
Chekutanga uye Chechipiri Chikamu cheImba Yevashandi
Chechitatu Chikamu cheImbwa Yevashandi
Dzimwe nguva Zvinhu hazviendi sezvakarongwa
Amai Imbwa Vanenge Vanofa Nezuva rechitanhatu
Whelping Puppies Zvinosuruvarisa Matambudziko
Kunyangwe Vakanaka Amai Vanokanganisa
Whelping Puppies: Iyo Green Mess
Mvura (Walrus) Mbwanana
C-Zvikamu Mune Imbwa
C-Chikamu Nekuda kweGuru Rakafa Puppy
Emergency Cesarean Chikamu Chinoponesa Vacheche Hupenyu
Nei madiki akafa mudumbu haagare achida c-zvikamu
Whelping Puppies: C-chikamu Mifananidzo
Zuva Rembwa Rine Pamuviri 62
Whelping uye Kurera Puppies: Kuberekwa kusvika kumavhiki matatu
Kurera Vana Puppy: Puppy Nipple Kuchengetedza
Pups 3 Mavhiki: Nguva yekutanga poto kudzidziswa
Kurera Vana Pups: Pups Svondo 4
Kurera Vana Pups: Pups Svondo 5
Kurera Vana Pups: Pups Svondo 6
Kurera Vana: Pups 6 kusvika 7.5 Mavhiki
Kurera Vana Pups: Pups 8 Mavhiki
Kurera Vacheche: Pups 8 kusvika 12 Mavhiki
Whelping uye Kurera Makuru Makuru Imbwa
Mastitis Mune Imbwa: Yeiyo Yekutakura Yekubereka Nyaya
Nei Matoyi Ekubereka Akaomesera Kudzidzisa?
Kuratidza, Genetics uye Kubereka
Kuedza Kuchengetedza Inoparara Dachshund Puppy
Whelping uye Kurera Vana Vacheche Nhau: Vatatu Vacheche Vanozvarwa
Whelping uye Kurera Mbwanana: Hupfu hwese haugare uchirarama
Whelping uye Kurera Vana Vechidiki: Midwoof Kufona
Whelping uye Kurera Yakazara Nguva Preemie Puppy
Whelping Mudiki kune Gestational Zera Puppy
C-Chikamu pane Imbwa Nekuda kweUterine Inertia
Eclampsia Kazhinji Inouraya Imbwa
Hypocalcemia (yakaderera calcium) muImbwa
SubQ hydrating iyo Puppy
Whelping uye Kurera singleton Pup
Premature Litter yeVacheche
Imwe Pamuviri Yakatangira
Imbwa Ine Pamuviri Inotora Fetus
Vana Vaviri Vanozvarwa, Wechitatu Fetus Akabatwa
CPR Inodiwa Kuchengeta Imwe Puppy
Whelping Puppies Congenital Kukanganisa
Puppy ine Umbilical Tambo Yakasungirirwa Kumakumbo
Puppy Akazvarwa neMatumbo kunze kwekunze
Marara Akazvarwa neMatumbo kunze kweMitumbi
Puppy Akazvarwa neDumbu uye Chest Mhango iri Kunze kweMuviri
Kwakaenda Zvakashata, Vet Anozvikuvadza
Imbwa Inorasikirwa neLitter uye Inotanga Kubata Mbwanana
Whelping Puppies: Zvisingatarisirwi Kununurwa Kwekutanga
Imbwa inotsvaira mazuva mashanu kutanga nekuda kweanofa maputi
Yakarasika 1 Puppy, Yakachengetedzwa 3
Dewclaw Kubvisa Kwakaitwa Zvakaipa
Whelping uye Kurera Pups: Heat Pad Caution
Whelping uye Kurera Huru Huru Dzembwa
Whelping uye Kurera Imbwa Paunenge Uchishanda
Kubatsira Mutumwa Anotakura Pups
Whelping uye Kurera Vana Vacheche Mapeji Mifananidzo
Maitiro Ekuwana Akanaka Muberekesi
Pros uye Cons yeInbreeding
Kuchengetedza Mwana E, Cleft Palate Puppy
Kuchengetedza Puppy: Tube Kudya: Cleft Palate
Inovhiringidza genitalia muImbwa
Whelping: Edza-ku-Bhuku reBhuku Nyaya
YeVana 'Kufambira Mberi Chati (.xls spreadsheet)
Cuban Mysti Puppies: Yakazara Nguva Mucus Plug - 1
Cuban Mysti Puppies: Yevashandi Nhau 2
Cuban Mysti Puppies: Yevashandi Nhau 3
Cuban Mysti Puppies: Rimwe-Zuva-Rekare Pups 4
Dhirivhari Dhirivhari Zuva kana maviri Akakundikana
chihuahua sanganisa nhema uye chena
poodle mambo charles cavalier musanganiswa
chena uye brindle pitbull vana
American eskimo imbwa chihuahua musanganiswa
30 makumi mana epondo imbwa dzinobereka
nhema uye shava gonzo terrier